WARBIXIN: Diogo Jota & Saxiixyada Ilaa Haatan La Dhamaystiray Kadib Furitaankii Suuqa – Kooxda.com
HomeSuuqaWARBIXIN: Diogo Jota & Saxiixyada Ilaa Haatan La Dhamaystiray Kadib Furitaankii Suuqa
WARBIXIN: Diogo Jota & Saxiixyada Ilaa Haatan La Dhamaystiray Kadib Furitaankii Suuqa
September 19, 2020 Abdiwali Adan Jamac Suuqa, Wararka Maanta, Warbixino 0
Waxa si Rasmi ah loogu jiraa suuqa kala iibsiga xagaaga waxana ay koox walba haatan ku mashquulsantahay sidii ay u xoojin lahayd kooxdeeda.
Kooxaha reer yurub ayaa haatan u furan in ay sameeyaan saxiixyada ay doonayaan in ay ku xoojiyaan kooxdooda xilli ciyaareedka dambe.
Kooxda Liverpool aya 24 saac gudohood sameeyay laba saxiix iyaga oo wacdaro ka dhigay suuqa kadib markii ay Thiago iyo Jota la soo wareegeen 24-kii saac ee ugu dambeeyay
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa saxiixyada ilaa haatan dhaca suuqa kala iibsiga.
Kooxda Liverpool ayaa xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga Diogo Jota kaas oo ay kala soo wareegeen kooxda Wolves.
Liverpool ayaa xaqiijisay in ah heshiis wakhti fog ah ka saxiixatay xiddiga weerarka ka ciyaara isaga oo noqday saxiixii 3-aad ee Liverpool xagaagan.
Kooxda Liverpool ayaa sidoo kale xaqiijisay in uu saxiixa cusub ee Diogo Jota kooxda u xidhan doono Lambarka No.20 kaas oo baneeyay Adam Lallana.
Thiago ayaa ugu dambayn noqday xiddig Liverpool ah kadib markii ay kooxdu shalay si Rasmi ah ugu dhawaaqday isaga oo qalinka ku duugay heshiis 4 sano ah.
Thiago ayaa la filayaain uu maalinta Axada ama khamiista daqiiqadihii ugu horeeyay u ciyaaro kooxdiisa cusub ee Liverpool kadib markii uu shalay ku soo biiray.
Chelsea ayaa ugu dambayn ku dhawaaqday saxiixa xiddiga Kai Havetz kadib bilo lala xidhiidhinayay wadahadalo kula jirtay kooxda Bayer Leverkusen.
Xiddiga 21 jirka ah ee reer Germany ayaa qalinka ku duugay heshiis wakhti fog ah oo uu ku joogi doono Stamford Bridge kadib markii lagu dhawaaqay heshiiskiisa.
Arsenal ayaa mar kale dib u soo ceshatay xiddiga khadka dhexe ee Ceballos kadib hal xilli ciyaareed oo uu heshiis amaah ah kula joogay kooxda.
Ceballos ayaa kooxda Arsenal la joogi doona hal xilli ciyaareed iyada oo Blues dookh u haysata in ay si toos ah ula wareegto xiddiga reer Spain.
Kooxda Man United ayaa xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Donny van de Beek kaas oo ay kala soo wareegtay kooxda Ajx.
Donny van de Beek oo 23 jir ah ayaa qalinka ku duugay heshiis 5 sano ah oo uu kula joogi doono kooxda ku ciyaara kooxda Old Trafford ilaa xagaaga 2025.
Kooxda Arsenal ayaa si Rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa daafaca Gabriel Magalhães Kaas oo ay kala soo saxiixatay kooxda reer france ee Lille.
Daafaca 22 jirka ah ee reer Brazil ayaa qalinka ku duugay heshiis wakhti dheer ah isaga oo kooxda u xidhan doona Lambarka No.6.
Kooxda chelsea ayaa si Rasmi ah ugu dhawaaqday in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga daafaca ka ciyaara ee Thiago Silva kaas oo ay si xor ah ugala soo wareegeen kooxda PSG.
Daafaca khabiirka ah ee Thiago Silva ayaa qalinka ku duugay heshiis hal sano ah oo uu kula joogi doono kooxda ku ciyaarta Stamford Bridge iyo hal sano oo dookh ah.
Kooxda Chelsea ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixeedii 4-aad ee suuqa xagaagan iyo saxiixii 2-aad ee 24-kii saac ee ugu dambeeyay.
Chelsea ayaa xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga reer France ee Malang Sarr kaas oo si xor ah ugala soo wareegeen kooxda Nice.
Daafaca Ben Chilwell ayaa noqday saxiixii 3-aad ee suuqa xagaaga kooxda chelsea kadib markii ay kooxdu si Rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixiisa.
Ben Chilwell ayaa qalinka ku duugay heshiis 5 sano ah oo uu ku joogi doono kooxda ku ciyaarta Stamford Bridge isaga oo ugu dambayn yimid kooxda Chelsea.
Kooxda Arsenal ayaa xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddigii hore ee kooxda chelsea ee Willian kaas oo qalinka ku duugay heshiis 3 sano ah.
Willian ayaa qalinka ku duugay heshiis uu todobaadkii ku qaadan doono lacag dhan 220 kun oo Gini kadib markii uu ku soo biiray Emirates Stadium.
Kooxda Liverpool ayaa xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga daafaca Bidix ee Kostas Tsimikas kaas oo ay kala soo wareegtay kooxda Olympiacos.
Kostas Tsimikas ayaa qalinka ku duugay heshiis wakhti fog ah oo lagu qiyaasay 5 sano isaga oo noqday saxiixii ugu horeeyay ee Liverpool ee xagaagan.
Kooxda Man City ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay saxiixa daafaca Nathan Ake kaas oo ay kala soo wareegtay Kooxda Bournemouth.
Man City ayaa daafaca reer Holland ee Nathan Ake ka soo bixisay lacag dhan 40 milyan oo euro iyo hal milyan oo guno ah oo ku xidhan qaab ciyaareedkiisa.
Daafacii hore ee kooxda Chelsea ee Nathan Ake ayaa qalinka ku duugay heshiis 5 sano ah oo kooxda ku sii hayn doona ilaa xagaaga 2025.
Inter Milan ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga Achraf Hakimi kaas oo ay kala soo wareegtay kooxda Real Madrid heshiis ku kacaya 45 milyan oo euro.
Kooxda ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in uu xiddiga 31 jirka ah qalinka ku duugay heshiis wakhti dheer ah oo uu kooxda kula sii joogi doono ilaa xagaaga 2025.
Kooxda Bayern Munich ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay dhamaystirtay saxiixa xiddiga Leroy Sane kaas oo ay kala soo wareegtay kooxda Man City.
Xiddiga reer Germany ee Leroy Sane ayaa qalinka ku duugay heshiis 5 sano ah oo uu ku sii joogi doono kooxda ilaa xagaaga 2025.
Bayern Munich ayaa xiddiga ka soo bixisay lacag dhan 50 milyan oo euro iyaga oo ugu dambayn helay saxiixa xiddiga kadib muddo ay ku raad joogeen.
Kooxda Man City ayaa dhamaystirtay saxiixa xiddiga Ferran Torres kaas oo ay kala soo wareegtay kooxda Valencia haatana sugaya in la siiyo warqada shaqo ee England.
Xiddiga 20 jirka ah ayaa qalinka ku duugay heshiis shan sano ah oo kooxda ku sii hayn doona ilaa xagaaga 2025.
Ever Banega -> Al Shabab
Josep Martinez -> RB Leipzig
Pedrinho -> Benfica
Dejan Lovren -> Zenit Saint Petersburg
Adam Lallan -> Brighton.
DEG-DEG: Liverpool Oo Si Rasmi Ah U Xaqiijisay In Ay Dhamaystirtay Saxiixa Diogo Jota, Lambarkee Ayuu U Xidhanayaa
RASMI: Tottenham Oo Xaqiijisay In Ay La Soo Saxiixatay Gareth Bale & Sergio Regulion